Tag: chinokonzera | Martech Zone
10 Mhando dzeakakonzera Email Campaign Iwe yaunofanirwa Kuita
Mukushanda pamwe nevatengesi vanoverengeka veemail, ini ndagara ndichishamisika nekushomeka kwezvakagadzirirwa-zvakagadzirwa, zvinobudirira zvakakonzera makwikwi emaimeri mukati meakaundi pakuitwa. Kana iwe uri chikuva kuverenga izvi - iwe unofanirwa kunge uine aya macampaign akagadzirira kuenda mune yako system. Kana iwe uri mushambadzi weemail, iwe unofanirwa kunge uchishanda kuti ubatanidze akawanda marudzi emaimeseji akakonzera iwe aunogona kuwedzera kubatikana, kutora, kuchengetedza uye kukwidziridza mikana. Vatengesi vasingashandisi email yakakonzera
Iyo Yevatengi Rwendo uye Optimove Kuchengetedzwa kweMagetsi
Imwe yeanonakidza, epamberi matekinoroji andakawona ku IRCE yaive Optimove. Optimove ndeye web-based software inoshandiswa nevatengi vevashambadzi uye nyanzvi dzekuchengetedza kuti vakure mabhizinesi avo epamhepo kuburikidza nevatengi vavo varipo. Iyo software inosanganisa hunyanzvi hwekushambadzira nesainzi yedata kubatsira makambani kuwedzera kukwidziridzwa kwevatengi uye kukosha kwehupenyu nekugadzira zvachose-zvakajairwa uye zvinobudirira kuchengetedza kushambadzira. Musanganiswa wechigadzirwa wakasarudzika wehunyanzvi hunosanganisira yemhando yepamusoro yevatengi modelling, fungidziro yevatengi analytics, mutengi hyper-kunanga,
Chirpify: Wedzera Shanduko kune Yako Yemagariro Media Kuongorora
Chitatu, October 8, 2014 Chitatu, October 8, 2014 Douglas Karr
Chirpify inogonesa vashambadzi kumisikidza zvinokonzeresa izvo zvinobvumidza vatengi kutora chikamu neiyo brand kubva kune chero chiteshi mune yemagariro midhiya. Unogona kumutsa zvinokonzeresa pamaitiro ekuti vashandisi venhau vatenge, vapinze kusimudzira, vawane mukana wekuti vagutsikane zvemukati, nezvimwe. Heino muenzaniso: Svondo ino, tarisa shambadziro yedu itsva yeTV, tarisa hashtag uye utore yako wega manakiro edu matsva. #awardsnight pic.twitter.com/ASU58SL1KX - Oreo Cookie (@Oreo) Ndira 24, 2014
Vero: Email Automation uye Kumakisazve
Chishanu, June 27, 2014 Chishanu, June 27, 2014 Douglas Karr
Vero ndeye email kushambadzira otomatiki sevhisi iyo yakanangana nekuwedzera kushandurwa kwevashandisi nekuchengetedza. Uchishandisa zvakanangwa maemail unogona kugadzira yakawedzera mari uye kugadzirisa kugutsikana kwevatengi. Martech Zone vaverengi vanogona kuwana 45% kubva pamwedzi mitanhatu kunyorera chirongwa cheVero Chidiki nekushandisa yedu yakabatana link! Vero Email Kushambadzira Inosanganisira Mumwe nemumwe mutengi profiles - Teedzera data nezve ako vatengi mune yako yekunyorera dhatabhesi. Shandisa iyo data yaunotora seyako